Zvikonzero zvekutora katsi nhema | Noti Katsi
Zvinosuruvarisa, kusvikira nhasi uno kuchine ngano zhinji uye mashura anoita kuti katsi nhema dzisiirwe kupfuura chero imwe kati. Uchapupu hweizvi ndiwo matanga emizinda uye nzvimbo dzekuchengetedza mhuka, idzo dzakazara.
Zvinosuruvarisa kuti munhu ane hura anotongwa - uye zvakare zvakaipa- neruvara rwebvudzi rake, kana zvichizivikanwa kuti vese avo vakagara neimwe yeizvi felines uye vachigara pamwe vanobvuma kuti ivo vakakosha kwazvo. Neichi chikonzero, Tiri kuzokupa dzakateedzana zvikonzero zvekutora katsi nhema.
1 Zvinonyanya kushivirira
3 Ipa yakawanda kambani
Genetics inokanganisa hunhu hwemhuka, kusanganisira isu vanhu. Panyaya yekatsi nhema, mune yayo mepu mepu inowanikwa, maererano ne Nyanzvi, asiri-agouti anonyarara. Izvi zvinoita kuti zvinyanye kushivirira dzimwe katsi, ndosaka hazviwanzo kuita zvehasha (Kunze kwekunge, chokwadi, iwe uchinzwa kuti hupenyu hwako hunotsamira pazviri, sezvingaitwa nemunhu chero upi zvake, zvisinei nerunyararo).
Kunze kwekusiiwa, hongu. Katsi nhema dema inowanzove mhuka yakadzikama, iyo edza kugadzira hupenyu hwako pasina dambudziko kune vamwe. Iye anogona zvakare kuve anonyanya kuda kana achinzwa zvakanaka kugara nemhuri yake. Iwe unoda humbowo here? Pano iwe une:
Wabata hunhu hwekunditsvinyira here? ♥ ️ #gatos #catlovers #cats #catsofinstagram #felinos #blackcat
Yakatumirwa posvo kubva Monica Sanchez Encina (@msencina) iyo Aug 22, 2018 pa9: 21 am PDT
Pfungwa dzako, vadiki vatema vanochengeta nguva zhinji vanongomukira uye vasingazorore sevamwe, kana pamwe zvakanyanya kudaro.
Ipa yakawanda kambani
Bug (1 gore), Keisha (7 years) uye Sasha (2 years). ??? #cats #catlovers #cats #catsofinstagram #gatosdeinstagram #felinos
Yakatumirwa posvo kubva Monica Sanchez Encina (@msencina) iyo Aug 13, 2018 pa5: 07 am PDT
Zvakanaka, ichokwadi. Iyi haisi chete katsi nhema, asi munhu wese. Asi ndakazviisa nekuti kungoti katsi yakasviba hazvireve kuti yasiyana. Muchokwadi, chero katsi yerudzi rupi zvarwo, chero bedzi ichichengetwa zvakanaka, ichave iri shamwari yedu yepamwoyo. Uye isu tichakwanisa kuongorora izvi nekufamba kwenguva.
Mhuka nhema hadzifanirwe "kudhimoni". Izvo zvaunofanirwa kuita kuvapa iwo mukana wekuti vafare.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Noti katsi » Katsi » Kugamuchirwa » Zvikonzero zvekutora katsi nhema